Calculator: Gbakọọ gị Survey si Opekempe Sample Size | Martech Zone
Calculator: Gbakọọ gị Survey si Opekempe Sample Size
Tọzdee, Eprel 22, 2021 Tọzdee, Eprel 22, 2021 Douglas Karr
Zụlite nyocha na ijide n'aka na ị nwere azịza ziri ezi na ị nwere ike ịdabere na mkpebi azụmaahịa gị chọrọ ezigbo nka. Nke mbụ, ị ga-ahụrịrị na a jụrụ ajụjụ gị n'ụzọ na-adịghị anabata nzaghachi. Nke abụọ, ị ga-ahụrịrị na ị nyochara mmadụ iji nweta nsonaazụ ọnụ ọgụgụ.
Kwesighi ịjụ onye ọ bụla, nke a ga-abụ nnukwu ọrụ na oke ọnụ. Researchlọ ọrụ na-ahụ maka ahịa na-arụ ọrụ iji nweta ntụkwasị obi dị elu, oke mperi nke njehie ma na-erute ọnụọgụ kachasị nke ndị nnata dị mkpa. A maara nke a dị ka gị nlele nha. Are bụ nlele a ụfọdụ pasent nke mkpokọta bi na-enweta a N'ihi na-enye a larịị nke obi ike iji kwado nsonaazụ ya. N'iji usoro anabatara nke ọma, ị nwere ike ikpebi nke ziri ezi nlele nha nke ahụ ga-anọchite anya ọnụọgụgụ n'ozuzu ya.
Ọ bụrụ na ị na-agụ nke a site na RSS ma ọ bụ email, pịa na saịtị ahụ iji ngwá ọrụ:
Gbakọọ gị Survey Sample Size
Kedu Ka Nlele Si Arụ Ọrụ?
Mpempe akwụkwọ maka ịchọpụta opekempe Sample
Formulakpụrụ iji chọpụta ntakịrị ihe nlele dị mkpa maka ọnụ ọgụgụ e nyere bụ dị ka ndị:
S = Obere ihe nlele nke i kwesiri ime nyocha nyere ntinye gi.
N = Ọnụ ọgụgụ mmadụ niile. Nke a bụ nha nke oke ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ị chọrọ ịtụle.
e = Oke nke njehie. Mgbe obula ichoputara onu ogugu, nsogbu gha adi na nsonaazụ ya.
z = Elee otu obi siri sie gi ike na onu ogugu mmadu gha achota azịza n’ime oke. Onu ogugu obi ike a na-aputa na z-akara, onu ogugu ndi ozo di iche na uzo di iche na ihe ozo.
p = Standard ndiiche (na nke a 0.5%).
Tags: mgbakoobi ikenyocha ndị ahịaonline mgbakonlele nhanlele nlelennyocha e mereobi ike nyochanyocha nyochanlele nyochanyocha z-akaraz-akara
E-Ahịa Ahịa-Ahịa: Ngwọta Ngwọta Maka Otu Ihe You Pụrụ Imeli Iji Mee Ihe Ọjọọ